Farmaajo iyo Kheyre isku Feker maka yihiin Shirka Dhuusamareeb? | Keydmedia
Farmaajo iyo Kheyre isku Feker maka yihiin Shirka Dhuusamareeb?
Shirka Dhuusamareeb ayaa kulminaya Madaxda dowladda iyo Maamul Goboleedyada oo ay aragti isugu dambeysay shirkii golaha amniga ee 2019 ka dhacay Garoowe, kaasoo lagu kala kacay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa lagu wadaa inuu maalmaha soo aada ka furmo shirka wada-tashi dowladda iyo Maamullada, kaasoo looga hadlayo arrimo xasaasi ah oo haatan taagan, sida Doorashadda.
Shirkaan waxaa ka qeyb gelaya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, RW ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, guddoonka labada Aqal ee BF, dhamaan madaxda maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Koofur Galbeed oo haatan ku sugan Dhuusamareeb, Jubbaland iyo Puntaland oo la filayo inay ku soo biiraan.
Ajendaha ugu weyn ee shirkaan looga hadli doono ayaa ah arrimaha doorashooyinka, waxaana aad ugu kala aragti duwan madaxda dowladda Soomaaliya oo qaarkood la safan Dowladd Goboleedyada oo feker ahaan qabo in doorasho qof iyo cod ah aysan dalka ka dhici karin sanadkan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya muddo kororsi, isagoo shacabka horey ugu balan-qaaday doorasho qof iyo cod ah 2020-2021.
Dhinaca kale, Kheyre ayaa dhowr jeer oo hore ku cel-celiyay in dalka ay ka dhaceyso doorasho, isagoo meesha ka saaray muddo kororsi, taas oo loo micneeyay inuu ku aragti yahay Maamullada, isla markaana la safanyahay.
Dad badan ayaa su’aalo iska weydiinayo qaabka ay suurta gal ku noqon karto in shirka Dhuusamareeb qodobo laga soo saaro, iyadoo madaxdii dowladda dhexdooda isku feker ka aheyn ajendaha shirka, inta aanba la gaarin dowlad goboleedyad.
Si kastaba, waxaa magaalada Dhuusamareeb ku sugan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil yarey oo aan qorshaheeda rasmiga ah la shaacin, balse warar hoose ayaa sheegaya in ay Villa Soomaaliya ay u yeertay.
Kulnkaan ayaa indhaha lagu wada hayaa, waxaa uuna u gogol xaari doono nooca doorasho ee dalka oo ay diyaarintiisa ku fashilantay dowladda hadda jirto.